मनोज गजुरेलको स्वास्थ्यको कामना गर्दै पूर्वपत्नी मीना ढकालको मनछुने स्टाटस – Sanjal Nepal
Homeसमाचारमनोज गजुरेलको स्वास्थ्यको कामना गर्दै पूर्वपत्नी मीना ढकालको मनछुने स्टाटस
November 9, 2020 admin समाचार 5190
१० कात्तिकमा कोरोना पुष्टि भएपछि गजुरेलमा घरमै आइसोलेसनमा बसिरहेका थिए र अचानक फोक्सोमा समस्या देखिएपछि उनी अहिले बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् ।शरिरमा अक्सिजन लेभल कम भएपछि उनलाई बिहिबार सशस्त्र प्रहरी अस्पताल लगिएको थियो । अहिले उनलाई आइसीयूमा राखेर उपचार भैरहको जनाइएको छ ।पूर्वपत्नी ढकाल फेसबुकमा लेख्छिन्
भलै समयले तिम्रो र मेरो बिचमा दुरी ल्यायो होला फेरीपनि मेरा दुई सन्तानको जन्मदाताको रुपमा आजपनि म तिमीलाई उत्तीकै सम्मान गर्छु र माया गर्छु। आज तिमी आईसीयू मा उपचारारत छौ भन्ने समाचारले मलाई वि़क्षिप्त बनायो । जतिसुकै मनमुटाव भएको भएपनि तिमी सिकिस्त भएको म सहन नसक्ने नै रहेछु आज महसुस भईरहेछ।म तिम्रो सुस्वास्थ्यको लागि भगवान संग प्रार्थना गर्दछु । तिम्रो जिवन संग मेरा दुइ सन्तान पनि जोडिएका छन। तिमी ठिक छौ र त उनीहरु ढुक्क छन, सुरक्षित छन । छुट्टै भएपनि टाढै भएपनि तिम्रो सलामतीले मात्रै मेरा सन्तान सलामत छन-म यो रियलाईज गरिरहेछु ।
मेरो प्रार्थना सुन्छन भगवानले, तिमी छिटै अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनेछौ र बाबुनानीको सामिप्यतामा पुग्नेछौ भन्ने आशामा छु । मनोज गजुरेल, तिमी छिटै हार मान्ने मान्छे होईनौ—मैले बिसौँ तिजका निराहार व्रत बसेकी छु तिम्रो लागि । आज पनि तिम्रो दिर्घायुको कामना गर्न छोडेकी छैन । छोराछोरी तिम्रो प्रति़क्षामा छन..। तिमी र म विच जस्तासुकै ब्यबहारीक बेमेल भएपनि तिम्रो जिवन मेरोलागि महत्वपुर्ण छ-हार नमानिदेउ । छिटै रिकभर भएर घर पुगेको देख्न पाउँ !-उही तिमीलाई आयुश्मान भएको देख्न चाहने तिम्री पूर्व अर्धाङ्गीनी !!
आधी मानिस र आधा चरा भएको अनौठो चरा फेला पारे
बाइडनले सुरु गरे ह्वाइट हाउस जाने तयारी
November 9, 2020 admin समाचार 7507
२० कात्तिक, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति पदका डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार जो बाइडनले जितको औपचारिक घोषणा नहुँदै राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउस प्रवेश गर्ने तयारी सुरु गरेका छन् । त्यसका लागि उनले ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ नामको ट्रान्जिसन
December 18, 2020 admin समाचार 2091
जतिबेला तपाईंको मृत्यु हुन्छ त्यही समयदेखि तपाईंको पहिचान एक लास बन्न सुरु गर्छ । अरे … लास लिएर आउनुहोस्। … लास लाई उठाउनुहोस्। .. लास लाई सुताउनुहोस। . यस्तै शब्द ले तपाइँलाई बोलाउछन ति मान्छेहरूले
महिनावारी भएको बेला पुजापाठ गर्न..,मन्दिर जान हुन्छ कि हुँदैन ? एक पटक अवश्य पढ्नुस् !
December 9, 2020 admin समाचार 5485
महिनावारी हुदा हिन्दु समाजमा मन्दिर प्रवेश नगर्नु भनेको छैन । पर बस्नु भनिन्छ । यो महिनावारीमा दिएको छुट्टी हो । तिम्रो शरीर बाट रगत जादा तिमि कमजोर हुन्छौ भनेर आराम दिएको छुट्टी हो । प्राचीन
LEX 18 agenda conversation: Job club (445165)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (418728)
Hello world! (346040)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (318832)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (115337)